Aragtida Midabka: Tilmaamaha Aasaasiga ah ee Isku Darka Midabbada | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Waraaqaha midabaynta, Khayraadka
Naqshadeynta garaafka, go'aanno aad u yar ayaa ka jawaaba kaliya qurxinta, sidoo kale go'aannada midabku ma sameeyaan. Midabku waa aalad isgaarsiineed iyo sida aad isugu dareyso ayaa gabi ahaanba beddeli kara naqshad iyo dareenka kiciya. Ogaanshaha aragtida midabka iyo mabaadi'da lagu xukumo ayaa kaa caawin kara inaad abuurto qaybo wax ku ool ah iyo in la xakameeyo waxa ay curiyahaadu gudbinayaan. Ka fikir taas markaad fiirineyso boodhadh, boodhadh ama infographic, macluumaadka ugu horreeya ee aan shaqeyno waxay la xiriiraan midabka. Xaaladaha bogagga, tusaale ahaan, midab midab aan habboonayn ayaa xitaa noo horseedi kara inaan ka tagno goobta, sida mid si dhammaystiran loo waafajiyay ayaa noo saadaalin kara inaan si qumman u qiimeyno waxa ku jira. Ma fahamsan tahay hadda sababta ay muhiimka u tahay in la ogaado aragtida midabka? Waa hagaag Sii wad akhrinta tusahan aasaasiga ah si aad isugu darto midabada oo aad ubarato dhammaan tabaha.
1 Waa maxay aragtida midabku?
2 Fikradaha aasaasiga ah ee la xiriira midabka
3 Giraangiraha midabka ama wareega wareega
4 Noocyada midabka
4.1 Midabada koowaad
4.2 Midabada labaad
4.3 Midabada jaamacadeed
4.4 Ka waran madow iyo cadaan?
5 Hagaha u dhigma midabka
5.1 Midabaynta midabka
5.2 Sidee laysugu daraa midabada leh giraanta chromatic
Waa maxay aragtida midabku?
Aragtida midabka waa xeerar aasaasi ah oo qeexaya dhammaan dhinacyada aasaasiga ah ee midabka xagga naqshadeynta garaafka, farshaxanka, sawir qaadista ama daabacaadda. Waxay naga caawinaysaa inaan fahamno saameynta ay midabbada qaarkood leeyihiin iyo annagaba waxay bixisaa macluumaad aad u qiimo badan oo ku saabsan sida loo abuuray iyo sida ay isu kabayaan.
Fikradaha aasaasiga ah ee la xiriira midabka
Kahor intaadan guda galin mawduuca, waxay ila tahay inay muhiim tahay in la ogaado macnaha saddex tayo aasaasi ah kuwaas oo naga caawinaya qeexida astaamaha midabka: midab, dhereg iyo fudeyd.
Eray isku mid ah ama midab, waxaa loola jeedaa heerka midab lagu tilmaami karo inuu la mid yahay ama ka duwan yahay midabada kale (badiyaa midabada aasaasiga ah: casaan, jaalle, buluug). Fududeynta, waa waxa aan ugu yeerno "midab".
Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku qorno magac midabyo gaar ah oo ku saleysan soo noqnoqoshada Tusaale ahaan, haddii aan eegno sawirka kore, innaga oo dhan inteenna ayaa ku qeexnaa codadkaas kuwo u dhow casaanka, maxaa yeelay taasi waa inta jeer ee aan qabanno.
Waa kan heerka daahirsanaanta midab, midabku wuu ka sii daahirsan yahay, sarrayntiisa ayaa sareysa. Mararka qaar, waxaan ula jeednaa saturation leh erayga "xoog", tan iyo midabada ugu cufan, kuwa ugu nadiifsan, sidoo kale waa kuwo aad u daran.
Sidoo kale loo yaqaan cad, waa hantida naga dhigaysa inaan u aragno midabbo sida iftiin ama mugdi, tan iyo midabada madow waa kuwa leh a iftiinka daciifka ah iyo kan ugu cad ee iska soo horjeedka saxda ah ayaa dhacaya. Mararka qaarkood waxaan isku xirnaa fikraddan ereyada sida dhalaalka, qiimaha, ama iftiinka.
Giraangiraha midabka ama wareega wareega
Wareegga koromada, sidoo kale loo yaqaan wheel wheel, waa qalab aad u faa'iido badan oo loogu talagalay abuuritaanka palettes iyo isku-dhafan ku habboon. Dalbo isku xigxiga horumarka midabada, mid kastaa wuxuu fadhiyaa meel go'an, wuxuuna naga caawinayaa inaan fahanno xiriirka ka dhexeeya. Iyada oo ku saleysan cilaaqaadkaas, waan kala saari karnaa saddex nooc oo midabbo ah: hoose, dhexe iyo sare.
Waxay yihiin risha, jaalle iyo buluug. Kuwani lama abuuro marka la isku daro laba ama in ka badan midabbo kala duwan, sidaa darteed, waa salka midabada inteeda kale. Marka la isku daro, waxaan soo saarnaa midabada labaad.
Waxay yihiin cagaar, oranji iyo guduud. Midabada sare waxaa abuuray isku dar laba midab oo aasaasi ah.
El guduud waa isku darka cas iyo buluug
El orange waxaa lagu soo saaraa isku darka casaanka iyo jaalle.
El cagaaran ka dhashay midowga jaallaha iyo buluugga.
Midabada jaamacadeed waa kuwa la abuuray isku qas midab aasaasi ah oo leh midab labaad:
El casaan cas ama vermilion ayaa soo baxa marka la isku darayo casaanka iyo oranjiga.
El oranji huruud ah o amber wuxuu ka dhasha isku darka liinta iyo jaalle.
El jaalle cagaaran, lime ama Carthusian, waxaa lagu helaa isku darka cagaarka iyo jaalaha.
El buluug cagaaran, turquoise buluug ama shaah, waxaa la abuuray iyadoo la isku darayo midabka cagaaran iyo buluug.
El buluug buluug ah waxay ku dhalataa iyada oo lagu dhex qasinayo buluug iyo violet.
El guduud guduudan ama garnet waxaan ku helnaa isku darka casaanka iyo guduudka.
Waa muhiim inaad taas ogaatid midabada aasaasiga ah marwalba iswaafajin karin oo leh midab labaad si loo soo saaro mid jaamacadeed. Tusaale ahaan, haddii aan isku darno buluug iyo liinta, kaliya waxaan heli doonaa midab bunni ah. Sidoo kale waa wax xiiso leh oo lagama maarmaan u ah abuurista codadkan, waa inaad si cad u caddeysaa taas Looma kala saarin midab jaamacadeed, mid sare ama midabbo asaasi ah Xaqiiq cajiib ah! Haddii aad isku darto saddexda midab ee aasaasiga ah, sidoo kale waxaad helaysaa bunni.
Ka waran madow iyo cadaan?
Waxa aan kuu sheegi doono hadda waxay kaa dhigeysaa inaad gebi ahaanba wareersan tahay. Cilmi ahaan, madow iyo caddaan midab ma ahan. Madow waa maqnaanshaha iftiinka iyo caddaanku waa isku darka dhammaan hooska muuqaalka iftiinka muuqda. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa madow iyo caddaan joogto ah shaabbadaysan naqshadaha sidee lagu gaaraa?
Dhab ahaantii wax kasta oo aan aragno ma ahan madow madow, mana aha caddaan. Waxay yihiin codad aad u dhow oo lagu helo isku darka midabbada midabada kala duwan ee iftiinka ama madow.
Hagaha u dhigma midabka
Midabaynta midabku waa wax fudud waxay naga dhigeysaa inaan u aragno isku-darka midabka inuu yahay wax hagaagsan oo wacan. Marka palette la kulmo wada noolaanshahaas, waxaan dareemeynaa nooc ka mid ah "Degganaansho muuqaal ah" in wuxuu naga dhigayaa mid xiiseynaya qaabeyntaSidoo kale, markaan aragno iskudhaf midab leh oo aan shaqeynin, waxaan u muuqanaa inaan diidno. Khaladaadka aadka u badan ayaa ah iska ilow in markasta uu jiro midab xukuma iyo tan waa inaanan isticmaalin midabbo badan oo aan micno lahaynMarkaad sidaa sameysid xitaa waxay kadhigi kartaa fariinta aan rabno inaan gudbino mid aan la fahmi karin (sida sawirka kore).
Sidee laysugu daraa midabada leh giraanta chromatic
Wareegga midabka ayaa naga caawin kara abuurista palettes iswaafajinaya. Waxaa jira qaaciidooyin noo oggolaanaya inaan helno waraaqaha aasaasiga ah. Kadib pWaan u habeyn karnaa oo aan shaqeyn karnaa inta aan rabno inaan helno isku-dhaf cusub. jira 6 siyaabood oo laysku daro midabada leh wareegga koromada.
Isku darka Monochrome: Isku-darkaas waxaan u adeegsannaa hal midab oo ka mid ah wareegga chromatic iyo inta kale ee codadka waxaa lagu helaa iyadoo lagu ciyaarayo dhereg iyo iftiin.
Isugeynta Analog: Waxaa loo sameeyaa iyadoo la isku darayo midabada ka soo baxa wareega midabka.
Isku darka dheeriga ah: Waxaa lagu helaa iyadoo la isku daro waxyaabo ka soo horjeeda chromatic, sida buluug iyo oranji. Isku-darka noocan ah waa inaad ka taxaddartaa, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya midabada isku-dubbaridan oo abuuri kara xoogaa "walaac muuqaal ah". Habka ugu fiican ee laysku daro waa raadinta isku dheelitirnaan, kala doorbidida codad yar oo dheregsan ama u wada isticmaalaya codad dhexdhexaad ah ama caddaan ah.
Kala-bax isku-darka kaabaha: Waxay la mid tahay ta kaabaha, kaliya midab u dhow midka isugeynta ayaa lagu darayaa. In kasta oo ay weli jiraan waxyaabo badan oo is-khilaafsan, oo lagu ciyaarayo saamiga midab kasta loo adeegsado, haddana naqshado badan oo iswaafajinaya ayaa la gaadhay.
Saddex: Isku-dhafkan, saddex-xagal isu-eg ayaa lagu sawirayaa shaagagga midabka iyadoo midabada loo daayay geesaha la adeegsanayo.
Isku-darka isku-darka ama tetrahedral-ka: laba lammaane oo midabbo iswaafajin ah ayaa la isku daraa, waa tan ugu adag in la dheellitiro, caadi ahaan midab xoog leh ayaa la doortaa oo dhererka ama iftiinka inta kale hoos loo dhigaa.
Haddii aad jeceshahay hagahan inaad isku darto midabada, ma seegi kartid qoraalkeena ku saabsan palettes midabka pastel.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Aragtida Midabka: Tilmaamaha Aasaasiga ah ee Isku Darka Midabbada